०.७६ प्रतिशत घट्यो नेप्से - Naya Patrika
सिन्डिकेट ताेड्न र प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न गृहमन्त्री बादलको निर्देशन
५ वर्षपछि चितवनमा बर्डफ्लू, प्रभावित क्षेत्रका कुखुरा धमाधम मारिँदै
शुन्य दशमलव ४६ अंक घट्यो नेप्से , कारोबार ३४ करोड
सल्यानमा बस दुर्घटना हुँदा २० घाइते
कृषक समूहलाई हाते ट्रयाक्टर र मकै छोडाउने मेसिन
बाजुराको बुढीगंगा गाउँपालिकामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
सामुदायिक विद्यालयमा स्कूल बस
ट्रयाक्टर व्यवसायीद्वारा गाउँपालिका घेराउ
डोल्पामा धान रोपाई सुरु, साख जोगाउन धान खेती
त्रिवेणिमा दुई सय किलोवाट विद्युत उत्पादन हुँदै
०.७६ प्रतिशत घट्यो नेप्से
नयाँ पत्रिका काठमाडाैँ, १ जेठ | जेठ ०१, २०७५
साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत ओरालो लागेको छ । गत साताको अन्तिम दुई कारोबार दिनदेखि ओरालो लागेको नेप्सेले यस दिन पनि सोही गतिलाई निरन्तरता दिएको छ । बजार खुलेदेखि ओरालो लागेको नेप्से कारोबार अवधिभर बढ्न सकेन ।
तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीहरूले लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार नाफा आर्जन गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको हो । दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरू अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका छन् । बजारले निश्चित दिशा लिन नसकेका कारण लगानीकर्ताहरूले यस्तो रणनीति अपनाएको एक ब्रोकरले बताए ।
यही कारण बजारमा सुस्तता आएको उनको भनाइ छ । बजारमा सुधारका कार्यक्रम नआएसम्म बजारले सकारात्मक दिशा नलिने उनको बुझाइ छ । नेप्सेले अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गररिहेको छ । सो प्रणाली आएपछि बजारले नयाँ उचाइ कायम गर्ने केही लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
१ हजार ३ सय ४८ बिन्दुबाट सुरु भएको नेप्से यस दिन १० दशमलव २८ अंक ओरालो लागेर १ हजार ३ सय ३८ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन २ दशलमव ४१ अंक घटेर २ सय २ दशमलव १ बिन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्सेको १४ दिने आरएसआई ५० दशमलव ३२ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ । यस दिन १ सय ६३ कम्पनीको ६ हजार ५ सय ८८ पटकको कारोबारमा रु. ४२ करोड ५१ लाख ९४ हजार २ सय ९९ बराबरको १० लाख ७ हजार ७ सय ६४ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
यस दिनको कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १८ दशमलव ४९ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा कुल बजार पुँजीकरण रु. १२ अर्ब ६ करोड घटेर रु. १५ खर्ब ७० अर्बमा सीमित भएको छ ।
कारोबार रकम र सेयर संख्याका आधारमा यस दिन सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सो वाणिज्य बैंकको यस दिन रु. ६ करोड ४७ लाखबराबरको १ लाख ९४ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
कारोबार संख्याका आधारमा भने यस दिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सो बिमा कम्पनीको यस दिन ३ सय ७९ पटक सेयर किनबेच भएको छ । हिमालयन डिस्टिलरीको सेयरमूल्य यस दिन करिब १० प्रतिशत बढेको छ ।
किसान माइक्रोफाइनान्स र भार्गव विकास बैंकको सेयरमूल्य यस दिन ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । कारोबारमा आएको १ सय ६३ कम्पनीमध्ये २३ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने १ सय २५ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १५ कम्पनीको सेयरमूल्य भने यस दिन स्थिर रहेको छ ।
सोमबार कारोबारमा आएको उत्पादनमूलक, अन्य र होटेल समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक १ दशमलव १२ प्रतिशत, अन्य समूहको शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत र होटेल समूहको शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत बढेको छ ।
विकास बैंक समूहको परिसूचक यस दिन १ दशमलव ७१ प्रतिशत, व्यापार समूहको १ दशमलव ३३ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको १ दशमलव ३ प्रतिशत, वित्त समूहको १ दशमलव १३ प्रतिशत, बिमा समूहको १ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत र वाणिज्य बैंक समूहको शून्य दशमलव ८७ प्रतिशत घटेको छ ।
‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा लगानीकर्ता
नेप्सेमा सामान्य सुधार लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट बैंकबीच बैंकास्योरेन्स
मल्टिपर्पोजको नाफा घट्यो
बधाई ओली र प्रचण्ड तर…
पूर्व एमालेबाट ४५ केन्द्रीय सदस्य मनोनित (सूचीसहित)
धानको भुस चोरेको आरोपमा वडाध्यक्षले दिए थुक चाट्ने सजाय
तीन महिनाभित्र नेकपाका तलैसम्मका कमिटी एकीकरण
सम्पादकीय : ठगी गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही
बलिउडमा ठूला घरानाका ज्वाइँहरू
Phone: +977 1 4012566 | 4012666
Fax : +977 1 4012569
Developed by NextNepal